2021wart – WART
【3/31 〆切】WART展　第2回作品募集のお知らせ
Announcement for the WART Cartoon Show
WART の 活動
【12/31 〆切】WART展示　作品募集のお知らせ
2022年 5月 9日（月）〜14日（土）
11:00 〜 18:00 ※最終日 14日は 17時まで
〒530-0047 大阪市北区西天満4–6– 24
連絡先：06 – 6361 – 6088
Google MAP へのリンク ： こちら
投稿日: 2022年3月12日 2022年3月15日
2022年 3月 6日(日) 15:00 開催 ウェビナー
▼ 第１部 基調講演
▼ 第２部 基調講演
▼ 第３部 パネルディスカション
投稿日: 2022年2月24日 2022年2月26日
シサム工房 × WART × 募金箱プロジェクト
シサム工房（ https://sisam.jp/ ）
2022年 3月 6日(土) 15:00-17:00
ZOOMウェビナー 事前申込 はこちら
▼ 第１部　基調講演
専門はビルマ（ミャンマー）の近現代史 1957年生まれ 5歳から7歳までビルマのラングーンで暮らしました。1962年から64年のことです。幼い日々のこととはいえ、そのときの記憶は今でも美しく残っています。大学生になってあらためてビルマに知的な関心を抱き、結果的に研究の世界に入りましたが、ビルマの風景と風土、人々の笑顔、留学時（1985－87年）にお世話になった友人や先生方の思い出は、つねに私の心の支えとなっています。
▼ 第２部　カートゥーンのアイディアソース紹介〜ミャンマーの文化習慣から最近の時事ネタまで〜
▼ 第３部　パネルディスカッション
１コマ漫画家。 FECO JAPAN（世界漫画家連盟日本支部）と 漫画家集団『ぼむ』の世話人。京都精華大学名誉教授。
【日程】3 月6日（日）15：00～17：00
Announcement for the WART 2nd Cartoon Show
WART ကာတွန်းပြပွဲ အတွက် ကာတွန်းများပို့ပေးရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
“ WART ကာတွန်းပြပွဲ — မြန်မာရဲ့ ယနေ့ အခြေအနေကို သရုပ်ဖော်ခြင်း— ”
WART Cartoon Show “Let’s think about what’s happening in Myanmar”
【ဒုတိယအကြိမ် ပေးပို့နိုင်သည့်ကာလ】The 2nd entry period
၂၀၂၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့ (အင်္ဂါ) မှ ၂၀၂၂ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ရက်နေ့ (ကြာသပတေးနေ့ာ)
From 2022 February 1 (Tue.) to 2022 March 31 (Thu.)
【ပေးပို့ရန် ကာတွန်းပုံဆိုဒ်】Cartoon Size to send
၂၁၀မီလီမီတာ (အလျား) ×၂၁၀မီလီမီတာ (အနံ) (595 pixel)
ရောင်စုံကာလာ၊ 350dpi, JPEG format ဖိုင်နာမည် တပ်ပို့ပါ။
ဖိုင်ဆိုဒ် မှာ 3MB အတွင်းဖိုင်ဖြစ်ရမည်။
Size: Within 210mm(length)×210mm(width), 595 pixel
File name: Colors, 350dpi, JPEG format and titles
(To attach title, name. This will use to translate under each Cartoon printed out in A4 size paper. )
Data size: 3MB and under
၁။ တစ်ခုခုသော ဘာသာရေး သို့မဟုတ် လူမျိုး၊ တိုင်းရင်းသား၊ Gender နှင့်ပတ်သက်ပြီး နှိမ့်ချခွဲခြားဆက်ဆံထုတ်ဖော် ရေးသားပြောဆိုခြင်း အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေး ကို ထိပါးစော်ကား သည်ဟု ယူဆရသော သရုပ်ဖော်မှုများကို တားမြစ်ပါသည်။
1. Cartoons with discriminatory or violent messages to specific religions, races, ethnic groups and genders may be barred from submission.
၂။ WART ၏။ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိဟု ယူဆလျှင်၊ ဖော်ပြတင်ဆက်ခြင်းမပြုသည်လည်း ရှိနိုင်ပါသည်။
2. Cartoons may not be exhibited in case we judge them incompatible with our association purpose.
၃။ ဤဂရုသို့ ပေးပို့သော ကာတွန်းများ မူပိုင်ခွင့်သည် Creative Commons License (အတို ကောက်အခေါ်အဝေါ် CC License) ၏ 【CC BY-NC-ND 4.0】ကိုသဘောတူပြီးသားဖြစ်သည်။
3. The copyright of the cartoons submitted to this association agrees to [CC BY-NC-ND 4.0] of Creative Common License (Abbreviation : CC License).
【CC BY-NC-ND 4.0】ဆိုသည်မှာ မူရင်းရေးဆွဲသူ၏။ ခရက်ဒတ် (အမည်၊ ကာတွန်းခေါင်းစဉ် စသဖြင့်) ဖော်ပြထားပြီး၊ တစ်စုံတစ်ယောက် ၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရည်ရွယ်သော၊ မူရင်း ကာတွန်း ကို ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ နဂိုမူရင်းကာတွန်း ကို လွတ်လပ်စွာ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းကို သဘောတူသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိုင်စင် ဖြစ်ပါသည်။
[CC BY-NC-ND 4.0] is an international license that offers credit to the original author (name, cartoon title, etc.), is not intended for the benefit of anyone and allows you to freely redistribute the original cartoon without modification.
၄။ ဤအသင်းမှ ဆောင်ရွက်သော ကူညီထောက်ပံ့ငွေရှာဖွေသော လုပ်ငန်း (တစ်စုံတစ်ယောက်၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရည်ရွယ်ပါ) အတွက် ကာတွန်းများကို ဖိတ်ခေါ်သည့် အခါတွင်လည်း၊ ပေးပို့ ထားသော ကာတွန်းများကို အသုံးပြုခွင့်ပြုပါသည်။
4. It is assumed that you have consented to the use of the submitted cartoons in support of the (non-profit) fundraising activities conducted by the association.
【ပေးပို့ရန်လင့်】Please send to the following URL.
Click here to apply for the work
Post to Facebook Group “2021WART”
ကာတွန်းခေါင်းစဉ် (ဖိုင်နာမည်)၊ ရေးဆွဲသူအမည်၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ တို့ကိုဖြည့်ရန်။
Title(File name), Artisit name and Contact address must be written
ကာတွန်းပုံတွင် စာသားရေးထားပါက ရေးသားထားသော စာသား ဒေတာကို လည်း ပေးပို့ပါရန်။ ဘာသာပြန်သည့်အခါ အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
In case sentences are written in work, provide them as text data as well so that can be used in translation.
အချိန်အခါ အပေါ်မူတည်ပြီး ဖြစ်ပျက်နေသောအကြောင်းအရာများကို ရေးဆွဲသည့်အခါ ကိုးကား သည့် URL (သို့) နောက်ခံအချက်အလက်များသိရှိနိုင်မည့် စာညွန်းကို ပူးတွဲပေးပို့ရန်။
If you are planning to use current news on your work, its articles, reference URL and documents showing its backgrounds should be provided.
▶ List of works of the 1st WART Exhibition
You can see it from the link below
投稿日: 2022年1月31日 2022年2月19日
３）投稿作品の著作権はクリエイティブコモンズライセンスにおける【CC BY-NC-ND 4.0】を承諾したものとします。
【CC BY-NC-ND 4.0】とは、原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）が表示され、非営利で、元の作品を改変することなく、作品を自由に再配布を承認した国際的なライセンスになります。
作品募集用 フォーム（外部リンク ※Google Form）
▶︎ 第１回 WART展 応募作品 一覧
投稿日: 2021年11月21日 2022年2月21日
【ပထမအကြိမ် ပေးပို့နိုင်သည့်ကာလ】The 1st entry period
၂၀၂၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ရက်နေ့ (စနေ) မှ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ရက်နေ့ (သောကြာ)
From 2021 November 13 (Sat.) to 2021 December 31 (Fri.)
▶ Example of work
投稿日: 2021年11月21日 2021年11月25日
作品募集用　フォーム（外部リンクへ　※Google Form）
投稿日: 2021年11月21日 2022年3月15日
2021年 11月 13日(土) 15:00 開催 ウェビナー
▼ 基礎情報 （パネルディスカッション）